Miyuu Mauro Icardi sii joogayaa kooxda Inter Milan?… (Wakiilkiisa ahna xaaskiisa Wanda Nara ayaa ka jawaabaysa) – Gool FM
Miyuu Mauro Icardi sii joogayaa kooxda Inter Milan?… (Wakiilkiisa ahna xaaskiisa Wanda Nara ayaa ka jawaabaysa)
Haaruun August 26, 2019
(Milano) 26 Agoosto 2019. Mauro Icardi ayaa la soo warinayaa inuu sii joogi doono kooxdiisa Inter Milan sida ay warinayso wakiilkiisa ahna xaaskiisa Wanda Nara.
Mauro Icardi ayaan rumeysnayn in xirfaddiisa ciyaareed ee Inter Milan ay soo dhammaatay, waxaana uu iska diiday dalabyo uga imaanaya kooxo kale, sidaas waxaa sheegeysa wakiilka laacibkan gabadha la yiraahdo Wanda Nara.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu isaga dhaqaaqi doono Inter Milan bilihii dhowaa, waxaana aad u doonayey saxiixiisa kooxo kale oo ka dhisan Yurub.
Kooxaha Juventus, Napoli iyo Monaco ayaa soo bandhigay xiisaha ay u qabaan xiddigan waxaana ay doonayaan inay laacibkan ka kaxaystaan garoonka San Siro.
Yeelkeede, xaaskiisa ahna wakiilkiisa Wanda Nara ayaa soo jeedisay in ciyaaryahanku uu kaliya indhaha ku hayo kooxda Inter, isla markaana uu iska diiday dalabyo uu helay si uu baaqi ugu sii ahaado kooxdan.
Waxaa xusid mudan in Icardi lambarkiisii 9-aad ee uu u wadan jiray Inter laga qaaday oo la siiyey Lukaku, laakiin maadaama uu sii joogayo kooxda reer Talyaani haatan waxaa loo gacan geliyey lambarka 7-aad ee naadiga.
Neymar Jr oo si maldahan u muujiyey kooxda uu doonayo inuu ku biiro Real Madrid iyo Barcelona isagoo isticmaalaya Instagram
Kooxda Manchester United oo heleysa war aad u xun ee ku saabsan Luke Shaw